Barcelona oo doon doonaysa Paolo Dybala & Juventus oo diiddan – Gool FM
(Barcelona) 21 Maarso 2017 – Wararka ka imanaya dalkaasi Spain ayaa tibaaxaya in Barcelona ay riixayso qorshe ay ku aardinayso Paulo Dybala, tiiyoo ay jirto in loo cusboonaysiinayo qandaraaskiisa Juventus.
Laacibka iyo kooxduba waxay xaqiijiyeen in laacibku qandaraas cusub saxiixi doono, balse tiiyoo ay taasi jirto, Mundo Deportivo ayaa qoraya in Barça ay Dybala u aragto laacib heer sare ah oo ku habboon waaxdeeda weerarka.
Kooxdan Catalan-ka ah ayaa sidoo kale ku doodaysa inuu Dybala doonayo inuu iyaga ku biiro waloow uusan rakhiis ku iman doonin, waxaa kaloo la sheegayaa in Bianconeri aysan xitaa ka baaraan degaynin iibinta 23-jirkan qiime kasta oo la gaaro.
Sida ku qoran calciomercato.com, qandaraas cusub baa laga saxiixi doonaa laacibka todobaadyada soo aaddan iyadoo la sheegayo in Juve aysan welwel ka qabin in ay waydo Dybala.
Waxaa xitaa lagu wadaa in lambarka 10-aad farta laga saaro fasalka soo aaddan, kaasoo ay horay u aadan jireeyn halyeeyadii kooxda sida Alessandro Del Piero, Roberto Baggio iyo Michel Platini.